Akụkọ - Mwepụta ihe nbipu UV ọhụrụ nke UV - 9060
Innovation maka akụkọ ihe mere eme mbipụta dijitalụ.
Banye na Market Global Na UV Ndị na-ebi akwụkwọ.
Mserin ndị na-ebi akwụkwọ dị ọhụrụ, enwere nnukwu ụlọ obibi akwụkwọ zuru ụwa ọnụ iji kpatụ.
Ahịa a na-ebugharị site na nnukwu uto na mgbidi mgbidi ụlọ na ụlọ ọrụ Mgbasa ozi. Ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ a ga-eji dijitalụ ebi akwụkwọ karịa ochie ejiji ngwá. New Digital ebi akwụkwọ na kpọmkwem anyị UV ikanam ebi na-ewere òkè ha ugbu a.
Digital UV ikanam ebipụta ọkọlọtọ elu ahịa mpịakọta na ebipụta suppliers na-egosi irè nke ngwaahịa.
Substrates dị iche iche / Akụrụngwa
Ọ bụ LEBLE LEB thatR that na-eme ka ndị na-ebi akwụkwọ Mserin UV LED nwee nrọ iji rụọ ọrụ. Ihe ntanetị UV a bụ ụzọ n'elu asọmpi na mpaghara obibi ọpụrụiche.
UV LED usoro dị mma maka ibipụta ihe dịka osisi, iko, plastik, metal na ndị ọzọ, ọ bụkwa azịza zuru oke iji bipụta ọtụtụ puku ikpe ekwentị, akpa akpụkpọ anụ, akwa ma ọ bụ nnukwu ihe dị ka okwu guitar. Iji mgbakwunye na-agbagharị, ị nwere ike idobe ihe oyiyi na karama mmiri.
Ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ UV na-ezere ihe ndị na-agbanwe agbanwe dị ka textiles na akpụkpọ anụ. Agbanyeghị, usoro UV ikanam na-ewepụta mgbanwe kachasị na nhọrọ nbipụta UV.
Mgbanwe ya pụtara obere ngwongwo achọrọ n'aka, belata mbupu yana usoro ọrụ ngwa ngwa. Ọ na-enye gị usoro agba agba agba na ọtụtụ ihe NA-etinye nsụgharị data na-agbanwe agbanwe.
Nwere ike ịdọrọ ndị ahịa azụmaahịa ọhụrụ ma dozie nsogbu gị na-eweta nsogbu.
Ogo dị na ikanam UV Printer
Usoro Mserin UV juputara na njirimara di iche iche dika sistemụ oriọna mmiri ya. Nhazi nke igwe na-eme ka ebiputa ihe di iche na udi di iche iche
Na maka ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe ntanetị mgbasa ozi nke na-ekpebi ịdị elu dị elu na-arụpụta ahụmịhe dị mfe, ngwa ngwa na nghọta. Ọbụna azụmaahịa uwe na-eche ma mbipụta UV ọ dị ha mma.
A na - emeziwanye ogo yana ngwanrọ RIP (raster image processor) sọftụwia nke na - enye ohere ịmegharị njikwa na ntanetị ọwa ọ bụla. Mbido bụ ikuku na-akwụghị ụgwọ kwụ ọtọ kwụ ọtọ. Ogo foto ebi akwụkwọ na Archival ebi akwụkwọ bụ ihe RIP mbụ mepụtara iji mee.